कांग्रेसमा भागबण्डा »	क्रान्तिकारीका १११ उम्मेदवार घोषणा »	बागमतीको फोहोर सोर्न उत्रिए रेग्मी »	Tuesday, May 21, 2013 दृष्टिकोण
मुलुकमा लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्नु हामी नेपालीका लागि विडम्बनाको विषय हो । नेपाली जनता र राष्ट्रियताको विषय नै राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ । हामीले नयाँ संविधान बनाएर राजनीतिक स्थायित्वसँगै समाजका हरेक वर्ग, तह र तप्काका जनतालाई समृद्धिको आशा पनि देखायौँ । तर, अक्षम नेतृत्व र दलबीच चलेको निषेधको राजनीतिले जनताका ती अधिकार धुमिल भए । दलीय नेतृत्व यस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दायित्वबाट विमुख हुँदै आयो । त्यसैले, अहिले लामो राजनीतिक मुद्दा बोकेको संविधानसभाको विडम्बनापूर्ण असामयिक अवसानपछि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमाथि चौतर्फी प्रश्न तेर्सिएका छन् । दुईवर्षे कार्यभार पाएको संविधानसभा किन चार वर्षसम्म तन्केर अवसान भयो । जुन पूर्णतः विडम्बनापूर्ण परिणाम हो । संघीयतामा जाने भनिसकेपछि पहिल्यै संघीयताका आधार के हुने भन्नेमा प्रभावकारी छलफल गर्नुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक दलबीच आपसमा त्यस्तो छलफल वा कुराकानी हुन सकेन । नहुनुपर्ने संविधानसभाको अवसान भई नै सक्यो । अब त मुलुकमा नयाँ चुनावका लागि अन्तरिम चुनावी सरकार पनि बनिसकेको छ । तर, विगतमा किन आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी किन संविधानसभाको अवसान भयो, त्यसको कारण खोजिनुपर्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलले जनतालाई यसको उचित जवाफ दिनैपर्छ । अन्यथा, लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात प्राप्त संविधानसभा अवसानको उचित कारण खोजी नगरे अब हुने निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन सक्दैन । परिणाम, पुनः मुलुकमा अराजकता, अन्योल र दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ । नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुअघि विगतमा चार-चार वर्ष लगाएर अर्बौं खर्चिंदा पनि संविधान किन बनेन, यस विषयमा व्यापक छलफल र खोजी हुनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य नै छ । संविधान निर्माणको विषय मुख्यगरी संघीयतासँग जोडिएको छ । संघीयतालाई कसरी स्विकार्ने वा यसको आधार के हुने भन्नेमा जिम्मेवार प्रमुख दल विभाजित हुनु राम्रो होइन । संघीयता कुनै पनि एउटा जात विशेषसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । संघीयता त गरिबको जीवनसँग जोडिनुपर्छ, देशका सबै वर्गका जनतालाई समृद्धितिर लाने किसिमको हुनुपर्छ । हामीले संघीयतालाई जनताको अधिकार, सम्पन्नता, विकास, अवसर, समृद्धि र सबै जनतालाई एक गराउने रूपमा हेरेका छौँ । तर, मुलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गैरजिम्मेवारीले संघीयतामा अनावश्यक राजनीति भइरहेको छ । स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड गरी समुन्नत राष्ट्र बनाउने आधार हामीसँग छन् । संघीय संरचनामा जाँदा समुचित रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरण हुनुपर्छ । नेपालमा संघीय राज्य निर्माण हाम्रै राज्यको एउटा 'कम्पोनेन्ट' हो । दिल्ली र बेइजिङको धारणा र मान्यतालाई बोक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुन्न । यो हाम्रो आप\_mनै मुद्दामा विदेशीको हस्तक्षेप स्विकार्नु कदापि ठीक होइन । गण्डक, टनकपुर सम्झौता र भारतबाट बिजुली ल्याउने विषयमा समेत हामीबीच नै विरोध र आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको देखिन्छ । मुख्य शक्तिको सहमतिविना हामीले बिप्पा सम्झौता गर्‍यौँ । हामीलाई सन्धि गर्दा झुक्याए भनेर कहिल्यै/कसैले बोलेनन् । बिपीले मात्र यस विषयलाई उठाउनुभएको थियो । यस्तै दलीय बेमेलकै कारण एकवर्षे र अठार महिने प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दयनीय अवस्थाबाट हामी गुजि्रयौँ, जुन नेपाली राजनीतिको लागि सर्वाधिक विडम्बनाको विषय हो । हामी पुनः त्यही विभाजित राजनीतिको दोसाँधमा आइपुगेका छौँ । विभाजन, विरोध र कटुता होइन, सबै मिलेर नै चुनावमा जानुपर्छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पनि चुनावमा आउनुपर्छ । उनीहरू कुनै शक्ति होइनन् भन्दै पेलेर जान खोजिनु मुलुक र जनताकै लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ । उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर चुनावमा जान ढिलाइ गरिनु हुन्न । महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदारसँगै उनीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउनैपर्छ । नयाँ निर्वाचनमा जान खोज्नु भनेको नयाँ राजनीतिक सरकार निर्माण गरी संविधान निर्माण गर्नकै लागि हो । हाम्रा आफ्ना राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्न राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता अपरिहार्य छ । वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा देखिएका मतभिन्नता नेपाली जनताका होइनन् । अरूको मुख ताक्ने तथा दलमा पनि आप\_mनो एकलौटी वर्चस्व चाहने केही दलीय नेतृत्वको हो । प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधीलाई परास्त गरी राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि राष्ट्रवादी शक्तिमा एकता हुनैपर्छ । चाहे त्यो कम्युनिस्ट शक्ति हुन् वा लोकतान्त्रिक शक्ति नै किन नहुन् । यस्ता राष्ट्रवादी शक्तिले मात्र परिवर्तनविरोधी तत्त्वलाई परास्त गरी नेपाललाई राजनीतिक निकासको बाटोमा डोहोर्‍याउन सक्छ । नेपालीको अस्तित्वलाई धावा नबोल्ने शक्तिबीच चुनावी तालमेल गर्न कांग्रेस पनि डराउनु हुँदैन । संविधान बन्छ र देशले निकास पाउँछ भने कांग्रेसले एमालेसँग मात्रै होइन, एकीकृत माओवादीका राष्ट्रवादी शक्तिसँग पनि एकता गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणका लागि बाहिरी एजेन्ट होइन, मुलुककै राष्ट्रवादीबीचको एकता चाहिएको छ । सस्तो प्रचारका लागि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाबीचको चुनावी गठबन्धनको विषय उठेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बढी फुर्किनुभएजस्तो लाग्छ । एमाओवादी-मधेसवादीले हाम्रा आप\_mना राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक र आर्थिक अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । चुनावी तालमेलको विषयमा हाम्रै पार्टीका शीर्ष तीन नेताबाट फरक-फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । त्यो कुनै पनि कोणबाट ठीक छैन । समान मुद्दामा समान धारणा बनाएर जान सक्नुपर्छ । हामी आफैँ बलियो नबनेका कारण माओवादी शक्तिशाली भएर आएको कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । संघीयतामा जाँदा हिमाल, पहाड र तराईका जनताले चीन र भारतको विकासबाट समान अवसर पाउने हुनुपर्छ । तर, संघीयतमा कुनै पनि छिमेकीको 'मोनोपोली' भने हुनु हुँदैन । 'जिरो संघ सिद्धान्त' अंगीकार गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई उपयुक्त नेतृत्वविहीनताका कारण गुज्रँदै आयो । यो संक्रमणकाललाई गति दिन फेरि पनि उपयुक्त राजनीतिक नेतृत्व नै आवश्यक छ । नेपालको समस्या सधैँ लिडरसिपमै रह्यो । उपयुक्त नेतृत्वले नै समस्या समाधान गर्न सक्छ । नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, समाज संस्कृतिको संरक्षणका लागि उपयुक्त राजनीतिक नेतृत्व नै समाधान हो । लोकतन्त्र आचरण हो, यो गरिबीसँग, नांगो मान्छे, शिक्षा, सडक र युवाको भविष्यसँग जोडिनुपर्छ । आचरणयुक्त सफल, कुशल र उपयुक्त नेतृत्व भए मात्र देशको सर्वांगीण विकास हुन्छ ।
Add new comment नेपाली मिडियाको टक्कर
नेपालमा अहिले जम्माजम्मी दुई किसिमका नागरिक छन्- लोकमानलाई बोक्ने र लोकमानलाई ठोक्ने । अरू बिचराको हिसाबै छैन ।सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै लोकतन्त्र बचाउन आन्दोलन भइरहेको छ, आन्दोलनकारी जनताको आवाज मिडियाबाट आइरहेको छ । तर, त्यो पीत पत्रकारिता हो भन्ने समाचार पनि मिडियाबाटै आइरहेको छ । एउटै व्यक्तिलाई नायक र खलनायक बनाउने नेपाली मिडियाको नियत के हो ? यसले त मिडियाकै बेइज्जत भयो कसैकसैले चिन्ता पनि गर्न थालेका छन् । तर, ती दुःखी आत्मालाई हसाउन अमेरिकी पत्रकारिताबारे एउटा जोक धेरै रमाइलो छ ःन्युयोर्कको गल्लीमा एउटी बालिका ज्यान जोगाउन चिच्याउँदै दगुरिरहेकी थिइन्, पछिपछि थियो भयानक जर्मन सेर्फड कुकुर । ब्ालिका अघिअघि, कुकुर पछिपछि । धेरै तमासे भए, कुकुरलाई धपाउने आँट कसैले गर्न सकेको थिएन । हुलबाट एक जवान निस्कियो, कुकुरलाई लखेट्यो, नजिक पुगेपछि इँटाले हिर्कायो, टाउकैमा लागेछ, कुकुर मर्‍यो, बालिका बचिन् । बालिकाकी आमा असिनपसिन हुँदै आइपुगिन् । जवानलाई उनले भनिन्, 'तिमी वास्तविक नायक रहेछौ, ल हेर भोलि पत्रिकामा समाचार आउनेछ- न्युयोर्कको बहादुर जवानले बालिका बचायो ।'जवानले भन्यो, 'सरी म्याडम, म न्युयोर्कवासी होइन ।'महिलाले भनिन्, 'ल ठीकै छ, भोलि पत्रिकाले लेख्नेछन्- बहादुर अमेरिकीले बालिका बचायो ।'फेरि जवानले भन्यो, 'होइन म्याडम, म त इरानबाट आएको हुँ ।'भोलिपल्ट न्युयोर्कका पत्रिकामा छापियो- 'इस्लामी उग्रवादीद्वारा अमेरिकी कुकुर मारियो ।'आखिर समाचार सत्य हो, प्रस्तुति मात्र आफ्नो नियतअनुसार भयो । नेपालको भन्दा सय वर्ष जेठो अमेरिकी पत्रकारिता त्यस्तो छ भने हाम्रो पत्रकारिताबाट धेरै अपेक्षा गरेर चित्त किन दुखाउनु ? ३ मे, प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा सगरमाथा टिभीमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो- पत्रकारिताका गुरु ध्रुवहरि अधिकारी । मित्र प्रकाश गिरीको प्रश्न थियो, 'नेपाली मिडियाले समाचार त चर्कै दिन्छन्, तर नीति निर्माताले सुनेको देखिएन । कतै हाम्रो समाचारको प्रस्तुति प्रभावहीन भएर त होइन ?'ध्रुवहरि गुरुले अलमलिएर भन्नुभयो, 'सायद तपाइर्ंले भनेको ठीकै हो ।'स्वाभाविक प्रश्न उठ्यो, 'त्यसो भए समाचारलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?'जवाफमा गुरु बोल्नुभयो, 'सायद हाम्रो समाचार प्रस्तुतिको शैली बदल्नुपर्छ । अहिले तेस्रो प्याराग्राफमा लेखेको कुरा पहिलोमा र पहिलो प्याराग्राफमा लेखेको कुरा दोस्रोमा लेख्नुपर्ने हो कि ?' गुरुको जवाफै अनौठोे । समाचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश त सुरुमै हुने हो, तब न पाठक अथवा सरोकारवालाको ध्यान जाला । गुरुले पढाएको पनि त्यही हो । अब महत्त्वपूर्ण अंश अन्तिममा हाल्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर त सस्पेन्स उपन्यासका लेखकले भने पो सुहाउला, पत्रकारिताका गुरुले पनि भन्न थालेछन् । धु्रवहरि गुरुकै कक्षामा बसेर पत्रकारितामा लागिएको हो, उहाँकै मुखबाट यस्तो सुन्दा उदेक लाग्यो, सायद स्वाभाविकै होला । आफ्नै विद्यार्थी सम्पादक छन्, त्यसैले गुरुहरूले भन्नुपर्ने हो- अंश तलमाथि परेर होइन, नियत तलमाथि पारेर समाचार प्रभावहीन भएको हो । एउटाले फलानो भ्रष्ट हो- शूली चढाऊ भन्छ, अर्कोले साधु हो-चौतारोमा राख भन्छ । अब कुन देशको कुन नीति निर्माताले दुवैथरीको माग सम्बोधन गर्न सक्छ ? नीति निर्माताले त एउटा निर्णय गर्छ । जब भइरहेको घटनाको रिपोर्टिङ गर्नुको सट्टा मिडियाले केही गर्ने वा केही बिगार्ने ठेक्का लिन्छ, तब एउटा पक्षको समाचार प्रभावकारी हुन्छ, अर्काको प्रभावहीन हुन्छ । संसारको रीतै यस्तै हो । मिडिया पो धेरै छन्, नेपाली समाज कति ठूलो छ र ? यहाँ पत्रिकामा छापेको भन्दा कान थापेको समाचार छिटो फैलिन्छ । कुन पत्रिकामा साहूहरूबीच बोलचाल बन्द भयो, कुन पत्रिकाका सम्पादकले मापसे गरेर ट्राफिकसँग गलफत्ती गर्‍यो र कुन पत्रकारले कहाँ घडेरी जोड्यो भन्ने कुरा उही पत्रिकाका सहकर्मीले पछि थाहा पाउँछन्, सर्वसाधारणले पहिल्यै । पत्रकारका आनीबानी, आहार-व्यवहार सबै थाहा पाएका पाठकले समाचारको नियत के हो भन्ने थाहा पाउँदैनन् र ? जब यो समाचारको स्वार्थ यो छ, त्यसको अर्थ यो हो भनेर चिया पसलमा गफ हुन्छ, त्यही समाचारले नीति निर्मातालाई कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ? सबै खुलस्त भइसक्दा पनि भ्रम दिन खोज्ने प्राणी पत्रकार मात्र हो भन्नु गलत हुनेछ, नागरिक समाजका सदस्य पनि त्यत्तिकै प्रतिभावान् देखिएका छन् । गत संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षको टिकट खोसिएर मर्माहत हुने एकजना नेता थिए जगन्नाथ खतिवडा । धाराप्रवाह बोल्न सक्ने, जोसिला र उदयपुरबाट चुनाव जितेर काम गरिसकेका खतिवडालाई पन्छाउनुपर्ने खासै कारण केही थिएन । तर, अधिवक्ता शम्भु थापाले सूर्य चिह्न बोेकेर जिल्ला जान्छु भनेपछि खतिवडालाई पाखा लगाइयो । चुनाव न हो, जिल्लामा दुःख गरेको नेतालाई विस्थापित गर्ने थापा पराजित भए । छातीमा मुड्कीले हानेर पार्टीको निर्देशन मानेका खतिवडा समानुपातिकबाट संविधानसभा पुगे । तर, अनौठो ! समानुपातिकबाट छानिने खतिवडा एमाले पार्टीका नेता छन्, एमालेको टिकटमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका थापा नागरिक समाजका अगुवा भएको भयै छन्, अझै कति हुने हुन् ! चुनावमा पार्टीको झन्डा बोक्ने थापाले अघिपछि नागरिक समाजको डन्डा बोकेर खबरदारी गर्दा सरोकारवालाले किन सुन्ने ? जगन्नाथ खतिवडाजस्तै एमालेका प्रखर नेता हुन् ठाकुर गैरे र रामकुमारी झाँक्री पनि । उनीहरूलाई हँसिया-हथौडा र सूर्य ध्वजा बोकेरै जनता जागृत गराउन हिँडेको सुहाउँछ । तर, उनीहरू पनि नागरिक समाजको अगुवा बनेर धर्ना दिन माओवादी र कांग्रेसका कार्यालय धाउन थालेका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्य गैरे र केन्द्रीयस्तरकी नेता झाँक्रीले पहिले त आफ्नो नेतृत्वलाई पो एकमत र स्पष्ट बनाउनुपर्ने हो । उनीहरूजस्ता लडाकु एमालेले पनि पेरिसडाँडा र सानेपाको चिन्ता गरेर नफुलेको कपाल किन फुलाउनु ? फेरि शम्भु थापा, ठाकुर गैरे र रामकुमारी झाँक्रीले भन्लान्- हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, सचेत नागरिकका रूपमा नागरिक समाजमा आबद्ध हुन किन नपाउने ? यस्तो प्रश्नको जवाफ गाह्रो छ । किनभने प्रचण्ड, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजय गच्छदार पनि यो देशका सचेत नागरिक हुन्, उनीहरू पनि नागरिक अगुवा बनेर बालुवाटार घेर्न गए भने खिलराज रेग्मीको अनुहार कस्तो होला ? Add new comment मधेसी दलहरूको एउटै चुनाव चिह्न
मुलुकमा फेरि एकपटक संविधानसभाको चुनाव हुँदै छ । यो चुनाव राजनीतिक दल र समाजका लागि एउटा थप अवसर पनि हो । यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । मधेसको अधिकार अझै प्राप्ति भइसकेको छैन त्यसैले मधेसको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसवादी दल एक हुन आवश्यक छ । आगामी संविधानसभाको चुनावसम्म मधेसवादी दलले सकभर एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ, त्यो सम्भव नभए मोर्चा बनाउनुपर्छ । तर, पार्टी चुनावमा जानु हँुदैन, मोर्चा चुनावमा जानुपर्छ । मधेेसवादी दलले म्ाोर्चा बनाए भने उक्त मोर्चाभित्र मधेसवादी पार्टी रहनुपर्छ । चुनाव चिह्न पनि मोर्चाकै हुनुपर्छ, पार्टीको हुनु हुँदैन । मधेसवादी दलले अलग-अलग पार्टी र अलग-अलग चुनाव चिह्न बनाएर गए कसैलाई फाइदा हुँदैन । त्यसैले एउटै झन्डा र एउटै चुनाव चिह्नका लागि प्रयास भइरहेको छ । यसको सम्भावना भएरै यसको प्रयास सुरु भएको हो । आममधेसी जनता र मधेसी कार्यकर्तामा चुनावमा मधेसी दल एक भएर आऊन् भन्ने चाहना छ । त्यस विषयमा केही छलफल अगाडि बढिरहेका छन् । तर, अझै पनि धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । कुनै सिद्धान्त र विचारका आधारमा मधेसवादी दल अलग-अलग भएका होइनन् किनकि सबैको सिद्धान्त एउटै हो । मधेसवादी दलको एउटै चुनाव चिह्न र एउटै पार्टी बनाउने र्फमुलाले मधेसी जनताको व्यापक हितलाईर् केन्दि्रत गर्छ । मधेसी जनताको सर्वकालीन र दीर्घकालीन हितलाई केन्दि्रत गर्ने हो भने सबै मधेसवादी दलको एउटै मोर्चा बन्न सक्छ । मधेसवादी दलमा एउटा घोषणापत्र, एकै प्रकारको विधान र एउटै प्रकारका संरचना छन् र उद्देश्य पनि एकै प्रकारका छन् भने मोर्चा एउटै किन हुन सक्दैन ? विगतमा धेरै प्रकारका तानातान भए, धेरै प्रकारका टुटफुट भए । आरोप प्रत्यारोप भए । त्यसकारण अब विगतको कुरा बिसार्ंै । यो संसार धेरै परिवर्तनशील छ । त्यसैले विगतलाई बिर्सेर नयाँ तरिकाबाट हामी जानुपर्छ । हामी गजेन्द्रनारायण सिंहका अनुयायी हाँै । मधेस र मधेसी जनताको व्यापक बृहत्तर हितका लागि मैले यो कुरा भनेको हँु । यसमा कसैले कुनै प्रकारले आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु आवश्यक छैन । कसैलाई अगाडि बढाउन या कसैलाई निमिट्यान्न पार्न, या कसैलाई बिगार्नका लागि मैले यो प्रस्ताव ल्याएको होइन । जस-जसले मधेस हित र अधिकारका लागि राजीति गरिरहेका छन्, उनीहरू समग्र रूपमा एकै ठाउँमा आएर एकै ठाउँबाट चुनावमा जानु पर्‍यो ।विगतमा सरकारमा हामी सबै थियाँै । को सरकारमा थिएन ? विगतको पछिल्लो सरकारमा उपेन्द्र यादव नभए पनि उहाँ विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी त हुनुहुन्थ्यो नि । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लोकतन्त्रपछि सरकारमा नगए पनि विगतमा उहाँ पनि सरकारमा जानुभएकै हो । जुनजुन पार्टीले सरकारमा जाने अवसर पाए, ती सरकारमा गए । त्यसैले मधेसमा सरकारबारे थाहा नपाएको व्यक्ति कोही पनि होइन । नचाहेर सरकारमा नगएको कोही पनि होइन । कोही नपाएर नगएको होला त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसैले विगतमा को सरकारमा गए, को सरकारमा गएन भन्ने आधार अहिले हुन सक्दैन । सरकारमा जानकै लागि पार्टी खोलिएका हुन्छन् र सरकारमा जान, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि कुनै व्यक्तिले राजनीति गरेको हुन्छ । सरकारमा जानु अपराध होइन र कुनै गल्ती पनि होइन । चुनावको मुद्दा संघीयता
आगामी चुनावमा मुख्य मुद्दा संघीयता नै हुनेछ । चुनाव संघीयतामा केन्दि्रत हुनेछ । विगतमा संघीयताप्रति कांग्रेस, एमाले, माओवादीको भूमिका कस्तो रह्यो, संघीयताको स्वरूपमा कुन-कुन दलले कसरी अगाडि सारेका छन्, यी सबै कुरालाई मधेसी जनताले हेर्नेछन् । मधेसवादी दलको प्रयत्नले गर्दा नै संघीयतामा आत्मसमर्पण गरेनौँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । आउँदो संविधानसभाको चुनाव संघीयताका हिसाबले एक किसिमले जनमत संग्रहजस्तै हो । त्यसैले संघीयताप्रति कमजोर दृष्टिकोण राख्ने दललाई मधेसी जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । संघीयता मधेसको आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दा हो । त्यसैले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दाबाट मधेसी जनता कुनै पनि अवस्थामा पछि हट्न सक्ने स्थिति छैन । मधेसी, मुस्लिम, थारू सबै समुदाय अहिले संघीयतावादी शक्ति भएका छन् । उनीहरू एक ठाउँमा उभिएर संघीयताका पक्षमा एउटा विचार अघि बढाइरहेका छन् । नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ
नेतृत्वको विषयमा मेरो कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह छैन । जसको नाममा सहमति हुन्छ, उसैको नाममा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । मेरो एउटा मात्र आग्रह हो कि मधेसमा बृहत्तर एकताको प्रयत्न हुनुपर्छ । तर, त्यसमा पार्टीको नाम के हो, अध्यक्ष को हुने, पार्टीको चुनाव चिह्न के हुनेलगायत एजेन्डामा मेरो कुनै अडान छैन । यी सबै एजेन्डा मैले बाहिर ल्याएँ भने त्यसलाई अरूले मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन । मेरो कुनै एजेन्डा छैन । म नेताको दौडमा पनि छैन । मधेसको बृहत्तर एकताका लागि भोलि कसैले मलाई तिमी पार्टीमा नबस, पार्टी छोड, नागरिक समाजमा बस भनेर भन्यो भने म त्यो पनि मान्न तयार छु । मधेसवादी दल एक भए भने मधेसवादी दलले कति सिट ल्याउँछन् भनेर सिटको कुरा गरेको होइन । जनताको 'सेन्टिमेन्ट'को कुरा गरेको हँु । मैले मधेसका सबै ठाउँ घुमेँ । मन्त्रीबाट हटिसकेपछि कुनै ठाउँमा एकपटक घुमेँ भने कुनै ठाउँमा दुईपटक घुमँे । मधेसी जनताको भावना यही छ ।
मंसिरमा चुनाव हुनुपर्छ
जुनसुकै अवस्थामा पनि आगामी मंसिरमा चुनाव हुनुपर्छ । सम्भव हुन्छ भने मंसिरअगाडि नै चुनाव हुनुपर्छ । यो सरकार चुनाव गर्नका लागि बनेको हो । यसले चुनाव गराउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो सरकारले के गर्‍यो, के गरेन भन्दा पनि यो सरकार चुनाव गराउनका लागि बनेको छ । त्यसैले यो सरकारले तुरुन्तै चुनावको मिति घोषणा गरेर चुनाव गराउनुपर्छ । हामी चुनावमा जाने पक्षमा छौँ । सबै पार्टी जनतामा जानुपर्छ । त्यसैले यो सरकारलाई मान्ने नमान्ने भन्दा पनि चुनाव गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो । चुनाव गराउनका लागि त कुनै न कुनै सरकार हुनुपर्‍यो । त्यसैले चुनाव गराउनकै लागि यो सरकार निर्माण भएको हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
(झा संघीय सद्भावना पार्टी अध्यक्ष हुन्)
Add new comment इतिहास रच्नेहरूलाई बधाई !
नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रचेका छन् । नेपाली क्रिकेट टोलीले बर्मुडामा सम्पन्न आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट डिभिजन-३ को उपाधि नेपालको पोल्टामा पारेको छ । साथै, नेपाल डिभिजन-२ मा बढुवा भई सन् २०१४ मा हुने विश्वकप छनोट खेल खेल्न योग्य साबित भएको छ । इटालीलाई फराकिलो अन्तरले हराएर डिभिजन-२ मा उक्लिएको नेपाल फाइनल खेलमा युगान्डामाथि हाबी भई डिभिजन-३ को विजेता बनेको हो । यसैबीच, अन्डर-१९ एसिसी क्रिकेटमा नेपाली टोलीले बहराइनलाई एक सय ९६ रनको विशाल अन्तरले पराजित गरेको छ । यसप्रकार नेपाल उक्त प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । यी दुवै जितका खबरले नेपालको क्रिकेट खेलको स्तर बढेको मात्रै देखाएको छैन, राज्यले खेल विकास तथा खेलाडीको स्तरवृद्धिका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने तर्फसमेत संकेत गरेको छ ।डिभिजन-२ मा बढुवा भएपछि अब नेपालले आफूसमेत डिभिजन-२ र १ का १० टोलीबीच विश्वकप छनोट खेल खेल्नेछ । उक्त विश्वकप छनोट खेलका शीर्ष दुई टिमले सन् २०१५ मा अस्टे्रलिया र न्युजिल्यान्डद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने विश्वकपमा खेल्न पाउनेछन् भने त्यसपछिका दुई टिमले चार वर्षसम्म एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाउनेछन् । यसको अर्थ, यी जितसँगै नेपाली क्रिकेट टिमका अगाडि केही रोमाञ्चकारी चुनौती थपिएका छन् । तर, यी उपलब्धि चुम्नका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीले अनेकौँ अप्ठेरा पार गरेका छन् । समयमै भिसा नपाउनाले बर्मुडाको मौसममा अनुकूल हुने गरी अभ्यास खेल खेल्ने अवसरबाट हाम्रा खेलाडी वञ्चित भए । सायद, त्यसैले गर्दा नेपाली टोलीले सुरुका दुई खेलमा नराम्रो हार व्यहोर्नुपर्‍यो । तथापि, त्यसपछिका चार खेलमा नेपालले अधिक राम्रो प्रदर्शन गरी अन्ततः ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ । सर्वत्र नकारात्मक खबर आइरहेका वेला क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडीले आशाको दियो बालेका छन् । यो दियोलाई निरन्तर बालिराख्ने दायित्व राज्य तथा खेलसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाको काँधमा आएको छ । क्रिकेट खेलाडीले त आफ्नो भूमिका पूरा गरेका छन् । अब विश्वकपमा खेल्ने सपना साकार बनाउन खासगरी राज्यले यसमा समुचित लगानी गर्ने तथा खेलाडीलाई प्रोत्साहनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकलाई डिभिजन—२ मा उकाल्न सफल खेलाडीलाई जनही तीन लाख ५० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको सुरुआत गरिसकेको छ । अब राज्यले क्रिकेट खेलाडीले खेलबाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा चिन्ता लिनुनपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन खेल महत्त्वपूर्ण माध्यम बनिरहेका सन्दर्भमा नेपाली क्रिकेटमाथि लगानी गर्नुपर्ने दायित्वको नेपालका कर्पोरेट हाउसले पनि बोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको नाम उँचो राख्ने नेपाली क्रिकेट टिमका सम्पूर्ण खेलाडी तथा खेल अधिकारीलाई बधाई । विश्वकपमा खेल्ने नेपाली क्रिकेट खेलाडीको सपना साकार होस्, शुभकामना ! Add new comment थप लेखहरु...